Soomaaliya, 01 December 2012
Sabti 1 December 2012
Dad ku Dhintay Beelo ku Dagaalamay Galgaduud
Dagaal sababay dhimashada in kabadan 8 qof ayna ku dhaawacmeen dad intaa ka badan ayaa ka dhacay deegaanka Caga Barwaaqo ee gobalka Galgaduud.
Martida: Cabdikariin Xuseen Guuleed
Barnaamijka Martida Makarafoonka waxaa marti ku ah Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka waramaya qorshaha wasaaradiisa ee amaanka iyo maamul u sameynta gobalada dalka oo dhan.
Caweyska: Cabdirisaaq Axmed Faarax 'Gaadaco"
Barnaamijka Caweyska waxaad ku dhageysan doontaan Q. 3aad ee wareysigii fanaanka Cabdirisaaq Axmed Faarax 'Gaadaco' iyo sheekooyin xiiso leh.
Burcadbadeedda Soomaaliya oo Siideysay 4 Korean ah
Saraakiisha wadanka Kuuriyada Koofureed ayaa sheegay in burcad-badeedda Soomaaliya ay siideysay afar badmaaxe oo Korean ah oo ay heysteen muddo 19 bilood ah.
Faaqidaadda: Dilalka iyo Amni-darada Soomaaliya
Barnaamijka Faaqidaadda ee toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay dilalka iyo amni-xumada ka jirta magaalooyinka ay ka taliso dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM.
Goobjoogayaasha oo ka Hadlay Doorashadii Somaliland
Goobjoogayaasha caalamiga ah ee kor kala socday doorashadii Somaliland ayaa guud ahaan ammaanay sidii ay doorashadu u dhacday, inkastoo ay jiraan goobo uu isdaba maris ka dhacay.
Cabdikariin: Gobalada Maamullo KMG ah Ayaan u Sameynaynaa
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed, ayaa sheegay in maamul ay dadku raali ka yihiin u sameynayaan gobalada dalka oo dhan.
Desalegn: Ciidankeenu way sii Joogayaan Somalia
Ra'iisul-wasaaraha Ethiopia, ayaa sheegay in Ciidankiisu ay joogayaan Somalia ilaa iyo inta ay howsha kala wareegayaan AMISOM. Ra'iisul-wasaaraha iyo madaxweynaha Somalia ayaa ku kulmay Addis Ababa.
Dhaqanka iyo Hiddaha # 136
Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha waxuu ku saabsanyahay sheekooyinkii maadda ahaa ee Cigaal Shiidaad
Codbixintiii Doorashada Somaliland oo soo Xirantay
Codbixinta doorashada deegaanka Somaliland ayaa soo xirantay. Guud ahaan doorashada ayaa si nabad-gelyo ah u dhacaysay, hase yeeshee waxaa rabshado ka dhaceen degmada Xuddun oo u dhow magaalada Laas-Caanood.
Somaliland: Doorashooyinka Deegaanka oo Maanta Bilowday
Dadka reer Somaliland ayaa saakay u dareeray goobaha cod bixinta si ay u doortaan maamulada dowladaha hoose
Mahiga oo Raalli Geliyey Soomaaliland
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya Augustine Mahiga oo ku sugan Hargeisa, ayaa sheegay inuu raali galin ka bixinayo qoraal uu sheegay inuu si khaldan uga soo baxay xafiiskiisa oo ay ka biyo diidday Soomaaliland.